नवलपरासीको ३ स्थानमा काग्रेसको अग्रता , एक मा माओवादी केन्द्र र एकमा लोकतान्त्रिक फोरम अगाडी, एमाले र काग्रेसको १/१स्थानमा जित | Hulaki Online
नवलपरासीको ३ स्थानमा काग्रेसको अग्रता , एक मा माओवादी केन्द्र र एकमा लोकतान्त्रिक फोरम अगाडी, एमाले र काग्रेसको १/१स्थानमा जित
July 1, 2017 संप्रेषण
परासी, नवलपरासीका प्रदेश नमबर ५ अन्तर्गत पर्ने ७ स्थानीय तह मध्ये २ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनीक भईसकेको छ भने अरु गाउ तथा नगरपालिकाहरुमा मत गणना जारी छ ।
सुस्ता गाउपालिकामा नेकपा एमालेले बिजय हासिल गरेको छ । यसैगरि नवलपरासीको प्रतापपुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । प्रतापपुरमा वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसले १, ५, ६, ७ र ९ मा जितेको छ । नेकपा एमालेले वडा नं २, माओवादी केन्द्रले वडा नं. ३, फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले वडा नं. ४ मा जित हात पारेको छ । वडा नं. ८ मा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार काडिर अली विजयी हुनु भएको छ ।
सुनवल नगरपालिकामा काग्रेसको अग्रता कायम छ । काग्रेसले प्रमुखमा ८५४३ मत प्राप्त गर्दा उसलाई एमालेले ७८९५ मतका साथ पछ्याईरहेको छ । त्यस्तैं उपप्रमुखमा एमालेले अग्रता लिएको छ । एमालेको ८३७६ मत छ भने काग्रेसको ७५०७ मत छ ।
बर्दघाट नगरपालिकामा काग्रेसको अग्रता कायम छ । बर्दघाटमा अहिले सम्मको गणनामा काग्रेसको ३७२७ मत छ भने एमालेको ३५३६ मत रहेको छ । उपमेयरमा काग्रेसको ३७५० मत छ भने एमालेको ३५७७ मत छ ।
रामग्राम नगरपालिकामा काग्रेसको अग्रता छ त्याहा काग्रेसले मेयरमा २९४२ मत प्राप्त गरेको छ भने एमालेको मेयरमा २२७१ मत छ । उपपमेयरमा काग्रेसको ३३०९ मत छ भने एमालेको उपमेयरमा १८५६ मत छ ।
पाल्हीनन्दन गााउपालिकामा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको अग्रता छ । माओवादी केन्द्रले अध्यक्षमा २५७० र उपाध्यक्षमा २१३५ मत प्राप्त गरेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको काग्रेसले अध्यक्षमा २१५७ र उपाध्यक्षमा २७६५ मत प्राप्त गरेको छ । उपाध्यक्षमा काग्रेसको अग्रता छ ।
सरावल गाँउपालिकामा लोकतान्त्रिक फोरमले अग्रता लिएको छ । फोरमले अध्यक्षमा २९८४ मत प्राप्त गरेको छ भने उपाध्यक्षमा २८०२ मत प्राप्त गरेको छ । यसैंगरि दोस्रो स्थानमा रहेको काग्रेसले अध्यक्षमा २०३५ र उपाध्यक्षमा २३५५ मत प्राप्त गरेको छ । एमालेले अध्यक्षमा १३४९ र उपाध्यक्षमा १३२१ मत प्राप्त गरेको छ । माओवादी केन्द्रले ११५८ प्रमुखमा र उपप्रमुखमा ११७६ मत प्राप्त गरेको छ । असार-१७, २०७४